तपाईँं तिनीहरूमा मानाङ्कन गरेका ग्रिडलाइनहरूद्वारा अक्षहरूलाई सेक्सनहरूमा भाग लगाउन सक्नुहुन्छ। यसले चित्रपटको झन राम्रो पूर्वावलोकन गर्न तपाईँंलाई अनुमति दिन्छ, विशेषत:तपाईँंले ठूला चित्रपटहरूसँग कार्य गरिरहेको खण्डमा। पूर्वनिर्धारितद्वारा Y अक्ष मुख्य ग्रिड सक्रिय गराउँदछ।
ढाँचाबद्ध गरिएको पट्टी, क्लिक गर्नुहोस्
मुख्य ग्रिडको रूपमा सेट गर्न अक्ष परिभाषित गर्दछ ।
चित्रपटको X अक्षमा ग्रिडलाइनहरू थप्दछ ।
चित्रपटको Yअक्षमा ग्रिडलाइनहरू थप्दछ ।
चित्रपटको Z अक्ष मा ग्रिडलाइनहरू थप्दछ. यदि तपाईँं त्रि-आयाामिक चित्रपटहरू सँग काम गरिरहनु भएको छ भने मात्र यो विकल्प उपलब्ध हुन्छ.
प्रत्येक अक्षका लागि साधारण ग्रिड मानाङ्कन गर्न यो क्षेत्र प्रयोग गर्नुहोस् । यो अक्षमा मानाङ्कन गरेको साधारण ग्रिडले मुख्य ग्रिडहरूको बीचको दूरी घटाउँदछ ।
ग्रिडलाइनहरू जोड्दछ जसले झन साना सेक्सनहरूमा X लाई उप विभाजन गर्दछ ।
ग्रिडलाइनहरू जोड्दछ जसले झन साना सेक्सनमा y लाई उप विभाजन गर्दछ ।
ग्रिडलाइनहरू जोड्दछ जसले झन साना सेक्सनमा z लाई उप विभाजन गर्दछ यदि तपाईँं त्रि-आयाामिक चित्रपटहरू सँग काम गरिरहेको खण्डमा मात्र यो विकल्प उपलब्ध हुन्छ ।
Title is: ग्रिडहरू